Google choro ihe nkpuchi nke aka ya, Samsung ghaputara gi ya | Gam akporosis
Google choro ihe nkpuchi nke aka ya, Samsung ghaputara ya ya
Samsung ya na Exynos, Qualcomm ya na Snapdragons, Huawei na Kirin na Mediatek ya na chips Mediatek chipsets. Companieslọ ọrụ anọ a bụ ndị na-achịkwa ụlọ ọrụ semiconductor na ụwa nke gam akporo smartphones na ụzọ monopolistic fọrọ nke nta ka ọ dịrị. Agbanyeghị, n'oge na-adịghị anya ha ga-enweta asọmpi site na Google
Dika ozi ohuru enyere na uzu dika eziokwu, onye na-eme igwe ihe nlere nke Mountain View na-akwado iji tinye ngalaba ihe omuma ama ọhụrụ gị na mbụ chipset. Akụkọ ahụ na-egosikwa na Samsung bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkpụ ya.
Mgbe ị tụlesịrị ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ na South Korea, ma na-eche echiche nke ọma iji aka aka ha wuo ya, Google ekpebiela na Samsung bụ ihe kachasị mma maka mkpa gị iji wuo chipset omenala maka smartphones ndị ọzọ. [Chọpụta: Google machibidoro ndị ọrụ ya ịwụnye ngwa mbugharị vidiyo vidiyo na kọmputa ọrụ]
Dabere na akụkọ, ọ ga-abụ Google Exynos chipset. Nke a ga - enwe akara abụọ Cortex-A78, abụọ A76 na anọ A55, nke na - ebute ihe octa-core. GPU ahọpụtara maka ya ga-abụ onye Mali MP20 dabere na ụlọ ọrụ ARM ọhụrụ, aha akara koodu ya bụ "Borr" ọ ga-aka nke ugbu a mma. Agbanyeghị, ekwesịrị ịmara na ebuputabeghị isi A78 na 'Borr', yabụ na anyị amatabeghị nkọwa nke nkọwa ha.
Dị ka data iji banye na akaụntụ, Cortex-A77 na-egosi arụmọrụ karịrị 20%, ma e jiri ya tụnyere Cortes-A76. Ya mere, anyị na-atụ anya na Cortex-A78 bara ụba na arụmọrụ arụmọrụ na-abawanye karịa ndị bu ya ụzọ. N'ihi nke a, o doro anya na anyị ga-enweta chipset dị elu nke enwere ike ịchọta naanị na Pixel 5s n'ọdịnihu, ọkọlọtọ Google na-abịanụ, na smartphones nke ọdịnala n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google choro ihe nkpuchi nke aka ya, Samsung ghaputara ya ya
Etu esi eji dijitalụ edebanye akwụkwọ PDF yana ekwentị gị na Acrobat Reader maka ERTEs, moratoriums na ndị ọzọ